Izindaba - Bangaki obaziyo ngezithombe eziqoshiwe eziyi-10 ezidume kakhulu emhlabeni?
Zingaki zalezi zibazi eziyishumi ozaziyo emhlabeni?Ngobukhulu obuthathu, ukubaza (Izithombe ezibaziwe) kunomlando omude namasiko nokugcinwa kobuciko okucebile. Imabula, ithusi, ukhuni nezinye izinto kuyaqoshwa, kuqoshwe, futhi kuqoshwe ukwakha izithombe zobuciko ezibonakalayo neziphathekayo ngesikhala esithile, kukhombisa impilo yezenhlalo nokuveza imizwa yobuhle yabaculi, Ukuvezwa kobuciko kwemibono yobuhle.Ukuthuthuka kobuciko bokubaza baseNtshonalanga kuhlangabezane nezintaba ezintathu, kuveza isithombe esigcwele sobuciko njengoba sazi. Ifinyelele isiqongo sayo sokuqala eGrisi naseRoma lasendulo. Inani eliphakeme kwakunguPhidias, ngenkathi i-Renaissance yase-Italy yaba yisiqongo sesibili. Akungabazeki ukuthi uMichelangelo wayengumuntu ophakeme kakhulu wale nkathi. Ngekhulu le-19, iFrance yayingenxa ye-Achievement kaRodin futhi yangena esiqongweni sesithathu.
Ngemuva kukaRodin, isithombe saseNtshonalanga sangena enkathini entsha-inkathi yokubaza kwanamuhla. Abadwebi bezinto ezibunjiwe bazama ukuqeda amaketanga esithombe esivelele, bamukele izindlela ezintsha zokukhuluma, baphishekele nemiqondo emisha.
Kulezi zinsuku, singakhombisa ubuciko nobuciko besikhathi ngasinye ngomlando we-panoramic wobuciko bokubaza, futhi lezi zithombe eziyishumi kumele zaziwe.
Ukuqhuma kweNefertiti isithombe esidwetshiwe esineminyaka engama-3 300 senziwe nge-limestone noplasta. Lesi sithombe siqoshwe uNefertiti, uMfazi Omkhulu Wasebukhosini kafaro wasendulo waseGibhithe u-Akhenaten. Ngokuvamile kukholakala ukuthi lesi sithombe saqoshwa ngumqophi uThutmose ngo-1345 BC.
Ukuqhuma kweNefertiti kube esinye sezithombe ezithandwa kakhulu eGibhithe lasendulo elinokukhiqizwa okuningi. Kungumbukiso wezinkanyezi waseBerlin Museum futhi uthathwa njengenkomba yobuhle yamazwe omhlaba. Isifanekiso sikaNefertiti sichazwa njengomunye wemisebenzi yobuciko ehlonishwayo kwezobuciko basendulo, okufana nesifihla seTutankhamun.
“Lesi sithombe sikhombisa umuntu wesifazane onentamo ende, amashiya amahle anjengomnsalo, amathambo aphakeme, ikhala elizacile, nezindebe ezibomvu ngokumoyizela okunamandla. Kwenza uNefertiti umsebenzi wasendulo wobuciko. Omunye wabesifazane abahle kakhulu. ”
Okukhona emnyuziyamu omusha eMuseum Museum eBerlin.
Unkulunkulukazi Wokunqoba eSamotrace
Unkulunkulukazi wokunqoba eSamothrace, umfanekiso wemabula, ukuphakama okungama-328 cm. Kungumsebenzi wokuqala wesithombe esidumile esasinda esikhathini sasendulo samaGrikhi. Ithathwa njengomcebo ongajwayelekile futhi umbhali ngeke ahlolwe.
Uyinhlanganisela yemidwebo eqinile futhi ethambile eyenziwe ukukhumbula ukwehlulwa kukaDemetrius, umnqobi weSamothrace empini yasendulo yamaGrikhi, elwa nemikhumbi yeNkosi uPtolemy waseGibhithe. Cishe ngonyaka we-190 BC, ukwamukela amakhosi namasosha anqobayo, lesi sithombe sakhiwa phambi kwethempeli eSamothrace. Ebhekene nomoya wasolwandle, unkulunkulukazi welula amaphiko akhe amahle, njengokungathi wayesezokwamukela amaqhawe eza ogwini. Ikhanda nezingalo zalesi sithombe sekunqunyiwe, kodwa umzimba wakhe omuhle usengambulwa ngezingubo ezincanyana nasemaphethweni, kukhanya ubungqabavu. Isifanekiso sonke sinomoya omangalisayo, okhombisa ngokuphelele ingqikithi yawo futhi ushiya isithombe esingasoze salibaleka.
ILouvre ekhona eParis ingenye yamagugu amathathu eLouvre.
U-Aphrodite weMilos, owaziwa nangokuthi uVenus oneBroken Arm. Iyaziwa njengesithombe esihle kunazo zonke phakathi kwezithombe zama-Greek zesifazane kuze kube manje. U-Aphrodite ungunkulunkulukazi wothando nobuhle ezinganekwaneni zasendulo zamaGrikhi, futhi ungomunye wonkulunkulu abayishumi nambili base-Olympus. U-Aphrodite akayena unkulunkulukazi wobulili kuphela, futhi ungunkulunkulukazi wothando nobuhle emhlabeni.
U-Aphrodite unesimo esihle nokubukeka kwabesifazane basendulo abangamaGrikhi, okukhombisa uthando nobuhle besifazane, futhi kubhekwa njengophawu oluphakeme kakhulu lobuhle bomzimba besifazane. Kuyinhlanganisela yobuhle nobuhle. Konke ukuziphatha kwakhe nolimi lwakhe kufanele kugcinwe futhi kusetshenziswe imodeli, kepha ayikwazi ukumela ubumsulwa besifazane.
Ukuthi izingalo ezilahlekile zeVenus ezineBroken Arms ekuqaleni zazibukeka kanjani sekuyindaba eyimfihlakalo enentshisekelo kakhulu kubaculi nakwizazi-mlando. Lesi sithombe sikhona eLouvre eParis, okungenye yezinto ezintathu eziyigugu.
Umfanekiso oqoshwe ngethusi kaDonatello “David” (c. 1440) kungumsebenzi wokuqala wokuvuselela isiko lasendulo lezithombe ezinqunu.
Esifanekisweni, lesi sibalo seBhayibheli asiseyona uphawu lomqondo, kepha impilo yokuphila kwenyama negazi. Ukusetshenziswa kwezithombe ezinqunu ukuveza izithombe zenkolo nokugcizelela ubuhle benyama kukhombisa ukuthi lo msebenzi ubaluleke kakhulu.
Ngenkathi iNkosi uHerode yakwa-Israyeli ibusa ngekhulu le-10 BC, amaFilisti ahlasela. Kwakukhona iqhawe elinguGoliyathi, elalingamamitha ayisishiyagalombili ubude futhi lihlome nge-halberd enkulu. Ama-Israyeli alokotha alwe izinsuku ezingama-40. Ngelinye ilanga, uDavid osemncane wavakashela umfowabo owayesebusosheni. Wezwa ukuthi uGoliyathi wayebusa kakhulu futhi wazilimaza. Wama kwelokuthi iNkosi uHerode ivumelane nehlazo lakhe lokuphuma ayobulala ama-Israyeli eGoliyathi. UHerode akakwazanga ukukucela. Ngemuva kokuphuma kukaDavid, wabhonga washaya uGoliyathi ekhanda ngomshini wendwayimane. Lesi sidlakela esimangele sawela phansi, uDavida wasehosha inkemba yakhe kabukhali wanquma ikhanda likaGoliyathi. UDavid uvezwa njengomfana omuhle ongumalusi esithombeni, egqoke isigqoko somalusi, ephethe inkemba ngesandla sakhe sokudla, enyathela ikhanda likaGoliyati elisikiwe ngaphansi kwezinyawo zakhe. Isimo ebusweni bakhe sikhululekile futhi kubonakala sengathi uyaziqhenya kancane.
UDonatello (uDonatello 1386-1466) wayeyisizukulwane sokuqala sabadwebi be-Early Renaissance e-Italy kanye nomqophi ovelele kakhulu wekhulu le-15. Lesi sithombe manje siseBargello Gallery eFlorence, e-Italy.
Isifanekiso sika "David" senziwa ekuqaleni kwekhulu le-16. Lesi sithombe singamamitha angu-3.96 ukuphakama. Kungumsebenzi omele uMichelangelo, umphathi wobuciko beRenaissance. Ithathwa njengesinye sezithombe zabantu besilisa eziqhayisa kakhulu emlandweni wobuciko baseNtshonalanga. Umdwebo kaMichelangelo wekhanda likaDavid waphenduka kancane kwesobunxele ngaphambi kwempi, amehlo akhe abheke esitheni, isandla sakhe sobunxele sasiphethe isihlilingi ehlombe lakhe, isandla sakhe sokudla silengiswa ngokwemvelo, izibhakela zakhe zazisongelwe kancane, ukubukeka kwakhe kwakuthile, kukhombisa ukuzinza kukaDavid , isibindi nokuqiniseka kokunqoba. Okhona eFlorence Academy of Fine Arts.
IStatue of Liberty (Statue Of Liberty), eyaziwa nangokuthi iLiberty Enlightening The World (Liberty Enlightening The World), iyisipho seminyaka engu-100 iFrance yasinikeza i-United States ngo-1876. I-Statue of Liberty yaqedwa ngumbazi odumile waseFrance uBartholdi eminyakeni eyi-10. ILady Liberty igqoke izingubo zasendulo zamaGrikhi, kanti umqhele ewufakayo ukhombisa imibhoshongo eyisikhombisa yamazwekazi ayisikhombisa nezilwandle ezine zomhlaba.
Unkulunkulukazi uphethe ithoshi elifanekisela inkululeko ngesandla sakhe sokudla, kanti isandla sakhe sobunxele siphethe “iSimemezelo Sokuzimela” esiqoshwe ngoJulayi 4, 1776, futhi ngaphansi kwezinyawo zakhe kukhona ozankosi abaphukile, amaketanga namaketanga. Ufanekisela inkululeko futhi ahlukane nezingqinamba zobushiqela. Kwaqedwa futhi kwembulwa ngo-Okthoba 28, 1886. Isakhiwo sangaphakathi sesithombe sensimbi esenziwe sakhiwa nguGustave Eiffel, owathi kamuva wakha i-Eiffel Tower eParis. ISitatimende Sokukhululeka singamamitha angama-46 ukuphakama, sinesisekelo samamitha angama-93 futhi sinesisindo esingamathani angama-225. Ngo-1984, iSitatimende Sokukhululeka sabalwa njengefa lamasiko omhlaba.
"I-Thinker" ibumba indoda enamandla yokusebenza. Umdondoshiya wayegobile, amadolo egobile, isandla sakhe sokudla silele esilevini, ethule ebuka usizi olwenzeke ngezansi. Ukubuka kwakhe okujulile nesenzo sokuluma isibhakela ngezindebe zakhe kukhombise isimo esibuhlungu ngokweqile. Isifanekiso sokubaza sinqunu, sinokhalo olukhothe kancane. Isandla sobunxele sibekwa ngokwemvelo edolweni langakwesobunxele, umlenze wangakwesokudla usekela ingalo yangakwesokudla, bese isandla sokudla sikhishwa esifanekisweni sesilevu esinezintambo ezicijile. Isibhakela esivinjiwe sicindezelwe izindebe. Ilingana kakhulu. Ngalesi sikhathi, imisipha yakhe iyaxhuma ngokwesaba, iveze imigqa ephelele. Yize isithombe sesithombe simile, kubonakala kukhombisa ukuthi wenza umsebenzi wokuqina ngamandla ngokuzithoba.
I- “The Thinker” iyisibonelo ohlelweni lwemisebenzi luka-Auguste Rodin. Kubuye kubonakale futhi kuveze umkhuba wakhe wobuciko bemilingo. Futhi kukhombisa ukwakhiwa kwakhe nokuhlanganiswa komqondo wobuciko womuntu-uRodin wohlelo lokucabanga lobufakazi.
UJeff Koons (uJeff Koons) ungumculi odumile wase-pop waseMelika. Ngo-2013, inja yakhe ebhaluni (iwolintshi) yayenziwe ngensimbi engagqwali eboshwe ngokusobala, kanti uChristie wakwazi ukusetha inani lentengo eliyi- $ 58.4 million. I-Koons iphinde yadala ezinye izinhlobo ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, i-magenta, ebomvu nephuzi.
Umsebenzi odumile "Isicabucabu" nguLuis Bourgeois ungaphezu kwamamitha angu-30 ubude. Okuhlaba umxhwele ukuthi isithombe esikhulu sesicabucabu sihlobene nomama womculi uqobo, owayelungisa ukhaphethi. Manje, izithombe zesicabucabu esizibonayo, ezibonakala zintekenteke, imilenze emide, ngesibindi zivikela amaqanda angama-marble angama-26, njengokungathi azowa phansi ngokushesha, kodwa futhi futhi avuse ngempumelelo ukwesaba umphakathi, izicabucabu ukubukeka kwazo okuphindayo Izingqikithi zifaka phakathi isicabucabu 1996. Lesi sithombe siseGuggenheim Museum eBilbao. ULuis Bourgeois wake wathi: Umdala umuntu, uhlakaniphile.
Ngubani owadala amaTerracotta Warriors namaHhashi eQin Shihuang? Kulinganiselwa ukuthi ayikho impendulo, kodwa ithonya layo ezizukulwaneni zobuciko zakamuva lisekhona nanamuhla futhi selibe yisitayela semfashini.